ဟာသ – Media Sharing
မိန်းကလေးတွေ မကြိုက်တဲ့ အမှန်တရား နည်းနည်းတော့ ခါးမယ် ဖတ်ကြည့်
မိန်းကလေးတွေ မကြိုက်တဲ့ အမှန်တရား နည်းနည်းတော့ ခါးမယ် ဖတ်ကြည့် ယောင်္ကျားတွေတော်တော်များများက အများပျော်အောင် Facebook မှာဖြစ်ဖြစ် အပြင်မှာ သူငယ်ချင်း ဆုံရင်ဖြစ်ဖြစ် လုလုအောင်ဟေ့ !!! မအေးသောင်းဟေ့ !!! စသဖြင့် ရီစရာတွေရေးတင် ဟာသတွေလုပ်ပြီး Troll နေကြတာ …။ တကယ့်အပြင်လောကမှာတော့ လုလုအောင် မအေးသောင်း ဆိုရင် ဘယ်ကောင်မှ
(၁၆) နှစ်သားကောင်လေး ချစ်သူနဲ့ ချိန်းတွေ့မိတဲ့ ရည်းစားမထားဖူးသေးသော အသက်(၅၀) ကျော် အပျိုကြီးရဲ့ အဖြစ်
ပဲ အရမ်းများတဲ့ အပျို ကြီး တယောက်ဟာ သူ့ကို ချစ်ခွင့်ပန်တဲ့သူတိုင်း အိုက်တင်အရမ်းခံပြီး ငြင်းပယ်ရင်းနဲ့ အသက် ၅၀ ကျော်သွားတော့ သူ့ကို ကြိုက်မဲ့သူ မရှိတော့ဘူး ဒါနဲ့ နောက်ဆုံး ရှားရှားပါးပါး ၁၆ နှစ်သားကောင်လေး ချစ်သူတယောက်ရလိုက်တယ်။ တိုတိုပြောရရင် ကောင်လေးရဲ့ ချိန်းဆိုမှုနဲ့အတူ ကန်ဘောင်ပေါ်ကို အပျိုကြီးတယောက် ရောက်လာပါတော့တယ် ။
တက်ကစီငှားစီးမိတဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျရဲ့ ကိုယျတှေ့ဖွဈရပျ …..
ကျမ ဒီနေ့ နေ့ခင်း မြောက်ဥက္ကလာကနေ လှည်းတန်းသွားတော့ တက္ကစီငှားစီးသွားတယ်။ ကျမက ဖေ့စဖုတ် ကြည့်နေကျလူဆိုတော့ တက္ကစီကို သေချာရွေးပြီးငှားရတယ်။ ကားထဲမှာလူပိုပါသလား။ အဲကွန်းဖွင့်ထားသလားကြည့်ရတယ်။ ဆေးခပ်မှာကြောက်လို့။ အဲဒါနဲ့ ကားငှားတာ တော်တော်ကြာသွားတယ်။ နောက်ဆုံး တက္ကစီတစ်စီးကျတော့မှ ကားသမားပုံစံကလည်း ရိုးသားတဲ့ပုံပေါ်တယ်။ အဲကွန်းလည်းဖွင့်မထားဘူး။ လူပိုလည်းမပါဘူး။ ပိုစိတ်ချရအောင် ထပ်မေးလိုက်သေးတယ်။ လူထပ်တင်မှာလား။ လမ်းမှာ အဲကွန်းဖွင့်မှာလား
မြန်မာစုံတွဲ ခိုးရိုက်ထားတာလေး (ရုပ်သံ)
မြန်မာစုံတွဲ ခိုးရိုက်ထားတာလေး (ရုပ်သံ) ဗွီဒီယိုဖိုင်ကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ မိန်းမလိုိက်စားခြင်း၏ ဆိုးကျိုးများ ဝိဓူရဇာတ်၌ ဝိဓူရပညာရှိအမတ်ကြီးက“မိန်းမလိုက်စားလွန်ကြူးသူ”များကို တေဇသင်္ခတံ=အားအစွမ်း၊ တန်ခိုးအစွမ်း ပညာအစွမ်းတို့၏ ကုန်ခမ်းခြင်းကို၊သမ္ပသံ(သမ္ပသန္တော)=မြော်မြင်သည်ဖြစ်၍၊ ဣတ္ထိံ= မိန်းမ ကို၊ဗဠံ=လွန်လွန်ကြူးကြူး၊နဂစ္ဆေယျ=မသွားလာစေရ။(စေ-ဂစ္ဆေယျ=အကယ်၍သွားလာငြားအံ့။)၊ခီလာ မေဒေါ=အသွေးအဆီ ကြုံလှီခြောက်ခန်းသည်ဖြစ်၍၊ ကာသံ=ချောင်းခြောက် ရောဂါစွဲကပ်ခြင်းသို့ လည်းကောင်း၊ ဒရံ=ကိုယ်ပူရောဂါ။ဆီးပူရောဂါ စွဲကပ်ခြင်းသို့လည်းကောင်း၊ ဗာလျံ=အားအင်ကုန်ခန်း နွမ်းရိခြင်းသို့လည်းကောင်း၊ နိဂစ္ဆတိ=ရောက်တတ်၏။ဟုဆုံးမတော်မူဖူးပါတယ်။
ဆရာလေးအိမ်ကို ဘုရားပန်းလဲပေးနေတဲ့ ၁၆ နှစ် ကောင်မလေး ရဲ့ဖြစ်ရပ်…
ဆရာလေးအိမ်ကို ဘုရားပန်းလဲပေးနေတဲ့ ၁၆ နှစ် ကောင်မလေး ရဲ့ဖြစ်ရပ်… ကျောင်းဆရာအိမ်မှာ ပန်းအိုးလဲပေးရင်းကနေ စိတ်ဖောက်သွားတဲ့ တောသူမလေး မိအေး မိအေး တဟင့်ဟင့် ရှိုက်နေလေသည်..။ မျက်ရည်များစိမ့်ဖြာဝေ့ဝဲ၍ဘဝကိုအစားခံလိုက်ရသလို..တလှိုက်လှိုက်ဖိုငင်နေသည်။ “သမီး ဘဝတော့ ပျက်ပါပြီ အမေရယ်” “ညည်းကို မေးနေတယ် ဘယ်သူနဲ့လဲလို့” “ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း” မိအေး ခေါင်းကိုသာ တွင်တွင်ခါရမ်းနေလေသည် …။
တရားခံ..ဘယ်​သူလဲ​ ဟေ့ ​..!!
တရားခံ..ဘယ်​သူလဲ​ ဟေ့ ​..!! အသက်​ ၅၅ နှစ်​​ရောက်​မှ..အသက်​ ၃၀အရွယ်​ကုမ္ပဏီစာ​ရေးမ​လေးနှင့်​ …အိမ်​​ထောင်​ပြုလိုက်​​သော ဘိုး​တော်​လူပျိုကြီးသည်​ …ဇနီးဖြစ်​သူ ကိုယ်ဝန်ရှိလာသည်ကိုသိလိုက်ရသောအခါ..အလွန်​ဝမ်းသာသွားပြီး… အိပ်​​ပျော်​​နေ​သောဇနီးသည်၏ဖုန်းကိုယူ၍ …သူမ၏ Contact List တွင်​ရှိသူများအား …”ငါ့မှာ …ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီ” ဟုMessage ပို့လိုက်လေသည်။ ခဏအကြာတွင် …ထိုသူများထံမှ ..Message များ ပြန်ဝင်​လာသည်။ *အမေ – “ဟဲ့
မီးပျက်နေတဲ့ မင်္ဂလာဦးညကြောင့် နောက်နေ့ နေ့လည်ထိ အပြင်ကို မထွက်နိုင်တော့တဲ့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ အဖြစ်ပျက်
ကိုမောင်ကောင်းနဲ့မချောဘုံတို့ ဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်ကြပြီး အကြင်လင်မယားဘ၀ရောက်ကြပါတယ်။ နှစ်ဘက်မိဘကလဲ ပြည့်စုံလှတာမဟုတ်တော့ မင်္ဂလာစရိတ်လေးရဖို့တောင် နှစ်တော်တော်ကြာ စုခဲ့ရတာလေ။ ဒီတော့သူများတွေလို ပျားရည်ဆမ်းခရီးတွေ၊ ဘာတွေလည်း မထွက်နိုင်ပါဘူး။ ကိုမောင်ကောင်းမိဘအိမ်မှာပဲ မင်္ဂလာဦးညကို လွန်မြောက်ခဲ့ရပါတယ်။ မနက်မိုးလင်းတော့ ကိုမောင်ကောင်းရဲ့ညီလေးဖြစ်တဲ့ မောင်ရွှေအေးဟာ ကျောင်းသွားခါနီး အမေပြင်ဆင်ပေးတဲ့ မနက်စာကို စားနေရင်း… “အမေ…။ အကိုနဲ့အမ ထကြပြီလား…” “မထကြသေးဘူး…” “ကျနော်တွေးမိတာကတော့…” “ကိုယ့်ဖာသာ